Vaovao - Fiverina sy fitrandrahana kaody an'ny chip IC
Famerenana ny code IC sy chip
Ao amin'ny fivoahan'ny kaody miverimberina sy fika an'ny chip an'ny chip, Shenzhen Sichi Technology Co. LTD. manome ireto serivisy manaraka ireto:
Famakafakana fizarana IC
Ao amin'ny injeniera miverina chip, ny fitrandrahana ny lisitra net / circuit dia asa tena lehibe. Ny kalitaon'ny fitrandrahana lisitra net sy ny hafainganana dia misy fiantraikany mivantana amin'ny famaranana, ny simulation ary ny LVS ary ny lafiny hafa amin'ny asa. Ny Sichi Technology amin'ny fikarohana teknika maharitra dia namintina tamim-pahombiazana andiam-pitsipika azo ampiharina sy fomba fanao, fitrandrahana haingam-pandeha haingam-pandeha isan-karazany amin'ny lisitra net net.
Miaraka amin'ny FIB ao amin'ny toerana misy chip IC ho an'ny lesoka miampita, ny fiampitana amin'ny firafitry ny fitaovana sy ny fitaovana, ny fanadihadihana teboka raikitra momba ny lesoka vita amin'ny chip. Izany dia afaka manampy ny mpamorona IC handinika ny fahombiazan'ny famolavolana IC.
Famakafakana ny fitrandrahana ny lisitr'ireo lisitra / fizaran-tany sy ny lojika
Ny famolavolana layout dia ny fanatanterahana ara-batana ny lojika amin'ny fizaran-tany, ny fahatsapana ireo vokatra mihodina. Sichi Technology amin'ny famolavolana mifanohitra amin'ny fototry ny fametrahana ny fitrandrahana, ny fanoloana tranomboky fanodinana, ny fiovan'ny fizotran'ny kendrena, ny fizahana DRC ary ny fikajiana LVS ary serivisy famolavolana hafa.
Ampiasao ny FBI hanovana ny tsipika IC
Ny fanovana ara-batana ny circuit chip miaraka amin'ny FIB dia ahafahan'ny mpamorona puce hitsapa ny olan'ny puce ho fanamarinana haingana kokoa sy marina kokoa ny endrika. Raha misy olana eo amin'ny faritra puce dia azo esorina na ahitsy amin'ny FIB Ity faritra ity dia aseho mba hahitana ny tena olana.FIB koa amin'ny famokarana vokatra farany alohan'ny fanomezana santionany sy horonantsary momba ny injeniera, ny ny fampiasana ireo santionany ireo dia afaka manafaingana ny fotoana famaranana ny vokatra amin'ny tsena. Ny fampiasana FIB hanovana ny puce dia afaka mampihena ny isan'ny fanovana endrika tsy nahomby, hanafohezana ny fotoana fampandrosoana sy ny tsingerina. Mba hahafahan'ny chip manala ny mpanjifa dia azonao atao ny manova ny tsipika mba hahatratrarana ny vokatry ny decryption.
Ao amin'ny microcontroller, CPLD, FPGA ary famakafakana miverina sy fiarovana hafa.
Ao amin'ny chip microcontroller sy CPLD ary FPGA toy ny analizy sy ny fitsapana, ny fikajiana kaody fihoaram-pefy ary ny famakafakana ny fitsapana ny fahalemen'ny fiarovana.
Fanadihadiana asa lojika
Aorian'ny faran'ny fitrandrahana ny lisitra net, matetika dia mila manatanteraka ny asa famaranana ny fizaran-tany, boribory fisaka handaminana ny fananganana faribolana ny firafitra ambaratongam-pahefana mba hahatakarana ny hevitra sy ny teknikan'ny endrik'ilay mpamorona, fa koa amin'ny tadiavo ny lisitry ny tanjona kendrena diso. Sichi Technology amin'ny alàlan'ny fizotry ny ambaratonga isan-karazany amin'ny famaranana sy ny famakafakana ny module, tsy hoe afaka mahatakatra tsara ny hevitry ny mpamolavola chip sy ny fahaizany mamolavola, fa koa amin'ny famakafakana sy famintinana ireo hevitra famolavolana mandroso mifototra amin'ny fahatsapana ny fahaizany mamorona manokana. .
Amin'izao fotoana izao, noho ny fikarohana ao an-toerana amin'ny sehatry ny famolavolana analog integrated circuit dia marefo ihany, ny famakafakana chip chip dia lasa maro an'isa an'ny injenieran'ny circuit analog mifototra amin'ny circuit simulation tena izy hanangonana traikefa amin'ny fomba mahomby, ny famolavolana IC mivadika lasa fampiroboroboana ny famolavolana fizaran-tany anatiny ary fomba mahomby.